पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले इटालियन क्लब फुटबल प्रतियोगिता सिरी ए को नयाँ सिजनमा डेब्यू गरेका छन् । डेब्यू खेलमा रोनाल्डोले गोल गर्न त सकेनन् तर उनको टिमले भने किएभो भेरोनासँग रोमाञ्चक जित हात पारेको छ । भेरोनाको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा तेस्रो मिनेटमै युभेन्टसका लागि सामी खेदिराले गोल गरेका थिए।
काठमाडाैं – इन्डोनेसियामा हुने १८ औँ एसियन गेम्स र बंगलादेशमा हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको नेपाली फुटबल टोली अभ्यास खेलका लागि आज थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेकाे छ । साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने राष्ट्रिय टोली र एसियन गेम्स खेल्ने यू–२३ टोलीका खेलाडी समावेश संयुक्त टोली वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि थाइल्याण्ड जान लागेको एन्फाले जनाएको
सेनेगलसँग बराबर स्काेर रहेकाे जापान यसकारण पुग्याे ‘नकअाउट’ चरणमा, जारी विश्वकपकाे दाेस्राे चरण पुग्ने एक मात्र एसियाली राष्ट्र !
एजेन्सी जारी विश्वकप फुटबलमा एक मात्र एसियाली राष्ट्र जापान दाेस्राे (नकआउट) चरणमा पुगेेकाे छ । बिहीबार भएकाे समूह ‘एच’काे अन्तिम खेलमा सेनेगलसँग समान स्काेर हुँदाहुँदै पनि जापान भाग्यले दाेस्राे चरण प्रवेश गरेकाे हाे । जापान र सेनेगलकाे गाेल, अंक सबै बराबरी भए पनि ‘फेयर प्ले’का आधारले जापानकाे भाग्य निर्धारण गर्याे
विश्वकप फुटबल : नकआउट चरणमा कसले कोसँग खेल्ने ?
विश्वकप फुटबलको समूह चरणका खेल सकिएका छन् । यससँगै १६ टिम नकआउट चरणमा पुगेका छन् भने १६ टिम घर फर्किएका छन् । नकआउट चरणका खेल शनिबारदेखि सुरु हुँदैछन् । नकआउट चरणको पहिलो खेलमा शनिबार फ्रान्स र अर्जेन्टिना खेल्नेछन् । समूह सीको विजेता फ्रान्सले समूह डीको उपविजेता अर्जेन्टिनासँग खेल्ने भएको हो
असार १४ -फिफा विश्वकप भन्ने बित्तिकै अधिकांशको दिमाग आउँने नाम हो ब्राजिल । पाँच पटकसम्म विश्वकपको उपाधी जितेको ब्राजिल फुटबल खेल्नकै लागि भनेर विश्वभर चिनिने गरिन्छ । विश्वकप २०१८ मा पनि राम्रो प्रर्दशन गरिरहेको ब्राजिल यो बर्ष पनि गुगलमा सर्वाधिक सर्च हुने टिममा परेको छ । रोनाल्डो , रोनाल्डिनो ,रिवाल्डो
मेक्सिकोविरुद्ध स्वीडेन ० – २ गोलको अग्रता
काठमाडौं । रुसमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा मेक्सिकोविरुद्ध स्वीडेन ० – २ गोलको अग्रता भएको छ । स्वीडेनको लुडविग ऑगस्टिंसनले ५० औँ मिनेटमा गोल गरेको हो । फेरि अर्को गोल एंड्रियास गर्न्कभिस्टले ६२ औँ मिनेटमा गोल गरेका हुन् । आज ७ः ४५ बजे मेक्सिको भर्सेस स्वीडेनको खेल सुरु भएको थियो ।
अर्जेन्टिनाको जितमा ढलेका म्याराडोना भन्छन् : म ठिक छु
नाइजेरियाविरुद्ध अर्जेन्टिनाले सनसनीपूर्ण जित हात पारेपछि ढलेका अर्जेन्टिनी लिजेण्ड डिएगो म्याराडोनाले आफू ठिक भएको बताएका छन् । नाइजेरिया र अर्जेन्टिनाबीचको खेलमा ८६ औँ मिनेटसम्म एक–एकको बराबरी चलेको थियो । तर खेलको ८६ औँ मिनेटमा मार्कस रोहोले गोल गर्दै अर्जेन्टिनाको अग्रता दोब्बर बनाएका थिए । अन्त्यमा त्यही गोल नै निर्णायक गोल
जारि विश्वकपमा आज हुने चार खेलहरू यी हुन्, कस्को प्रतिस्पर्धा को संग ? समय तालिका सहित
रूस – रूसमा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलमा बुधबार पनि (आज) ४ खेलहरू हुँदैछन्। समूह चरण तेस्रो तथा अन्तिम राउन्ड अन्तर्गत आज हुने पहिलो खेलमा समूह ‘एफ’ मा रहेका जर्मनी र दक्षिण कोरियाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। खेल कजान एरिना रंगशालामा नेपाली समयअनुसार बेलुका ७ः४५ बाट सुरु हुनेछ।’ यो समूहमा
रोनाल्डोको पेनाल्टी रोक्ने गोलकिपरः ‘जो घरबिहीन थिए, क्लबको ढोकामा भिखारी भनेर शरिरमा सिक्काहरु फाल्थे’ उनि घरबारविहीन थिए जो सडकका पार्क पनि सुत्ने गर्थे
२०१४ को विश्वकपको पहिलो खेलपछि इरानका गोलकिपर अलिरेजा हाघिघीको चर्चा चुलिएको थियो। कारण थियो, उनको सुन्दरता। उनको ‘हेन्डसमनेस’ विश्वभरका मिडियामा हेडलाइन बन्यो। क्षणभरमै उनी विश्वका हजारौं युवा–युवतीका प्रिय बने। २०१८ मा इरानका पहिलो रोजाईका गोलकिपर अलिरेजा बैरानबन्द अघिल्लो विश्वकपका गोलकिपर हाघिघी जति ‘हेन्डसम’ त छैनन् तर उनको जीवनकथा भने प्रत्येक